Chidzidzo Chitsva: Chimwe Chetatu Chevakadzi Vanogashira Clinical Misdiagnosis yeVaginitis |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Chidzidzo Chitsva: Chimwe Chetatu chevakadzi Vanogashira Clinical Misdiagnosis yeVaginitis
BD (Becton, Dickinson neKambani) nhasi yakazivisa mhedzisiro yeongororo yakaongororwa nevezera yakabudiswa mujenari yeObstetrics & Gynecology iyo yakaratidza kuongororwa kwemamolecular inogona kuvandudza kurongeka kwekuongororwa kwevaginitis uye kutungamirira kune dzimwe nzira dzakakodzera uye nenguva yekurapa.
Mune bepa, Kuita kweVaginal Panel Assay Kuenzaniswa neClinical Diagnosis yeVaginitis - iyo inoshuma zvakawanikwa kubva kuBD kliniki yekuedza - zvikonzero zvitatu zvevaginitis (bacterial vaginosis [BV], vulvovaginal candidiasis [VVC] kana Trichomonas vaginalis [TV ]) dzakadzidzwa kuenzanisa kuongororwa kwechiremba nemigumisiro kubva pakuongorora kwema molecular. Chidzidzo chacho chakawana kuti kana zvichienzaniswa nekuongorora kwema molecular, kuongororwa kwechiremba kwakapotsa 45.3 muzana yezviitiko zvakanaka (180 ye397) uye yakaratidza zvisizvo 12.3 muzana yezviitiko zvisina kunaka sezvakanaka (123 ye879).
Chidzidzo ichi chakasarudzwawo kuti chibatanidzwe muObstetrics & Gynecology Journal Club, iyo inosarudza zvidzidzo zviviri kana zvitatu pane imwe nyaya kuti ipe vadzidzi vezvokurapa mukana wekuongorora mapepa akakosha uye kuvabatsira kuvaka hwaro hwehumbowo-hwakavakirwa tsika.
Pakati pemamiriyoni matanhatu nemamiriyoni e6 kushanyirwa kwehutano hwehutano nevakadzi muU. zera harina kuenzaniswa.
"Kusaziva kunoreva kurudziro yekurapa isina kufanira - kungave kubatwa zvisina kunaka kana kuwandisa," akadaro munyori-munyori wekudzidza Molly Broache, mubatanidzwa wesainzi yekurapa weIntegrated Diagnostic Solutions paBD. “Mukadzi angakumbirwa kuti adzokere kuna chiremba zvisiri madikanwa, kana kuti angatanga kusanzwa nemishonga inorwisa utachiona nemhaka yokuti ari kunwa mishonga inorwisa mabhakitiriya yaasingadi chaizvoizvo.”
Chidzidzo ichi chakafananidza kuongororwa kwana chiremba kwevaginitis nemhedzisiro yekuyedzwa kwevhaini yakaitwa paBD MAX™ System, FDA-musika yakatenderwa mamorekuru bvunzo inoshandisa nucleic acid amplification kuona hutachiona hunokonzera BV, VVC, uye TV. Chidzidzo ichi chaisanganisira 489 vatori vechikamu vane zviratidzo. Vatori vechikamu vakagashira kuongororwa kwekiriniki uye vaive neassay swab yakaunganidzwa panguva yekushanya kwavo. Maswab akaendeswa kune imwe nzvimbo yekuyedza uye gare gare akaenzaniswa nekuongororwa kwechiremba.
"Tinonyatsoita vakadzi basa rekurapa kana isu tisingashandisi zvishandiso zvakanakisa zvatinazvo kuti tiongorore chikonzero kana zvikonzero zvezviratidzo zvakavatuma kutsvaga hutano," akadaro munyori mubatanidzwa wekudzidza Barbara Van Der Pol, Ph.D ., MPH uye Purofesa weMishonga uye Hutano Hwevanhu. “Zvirwere zvakawandisa zvinokonzerwa neutachiona hwakasiyana-siyana kuti tifunge kuti tinogona kuzviziva pasina ongororo yemhando yepamusoro. Iyo data iri mubepa rino inosimbisa kuti isu tine chikwereti kuvakadzi sarudzo dzakanakisa dziripo uye kutariswa kwekiriniki hakuna kukwana. "
Iyo BD MAX ™ Vaginal Panel Assay inogona kubatsira kugadzirisa zvipimo zvekuongororwa kwekiriniki uye inogona kubatsira kuvandudza kuongororwa kwechokwadi. Ichi chiedzo chemagetsi chine nguva pfupi yekuchinja (inenge maawa matatu kumhanya pakati pemasampuli maviri ne24 panguva imwe chete), saka mhedzisiro yezuva rimwe chete inogoneka kana murapi aine chiridzwa chiripo panzvimbo. Assay otomatiki yakagadzirirwa kuderedza kusiyanisa uye kuzviisa pasi, nekudaro zvichibatsira kuwedzera kuongororwa kwechokwadi.
“Mukadzi kana akaongororwa zvisiri izvo — akaudzwa kuti haana hutachiona asi anotozviita kana kuudzwa kuti ane vaginitis asi haana utachiona — zvinounza kuomerwa nenjodzi,” akadaro Broache. "Vakadzi vanokodzera zviri nani."
World Tourism Network Inodaidza Izwi reUnited uye ...